Macalinka Cusub Ee Muqdisho City Club Maxamed Mistiri Lamjed Oo kulankii Ugu Horeeyay La Qaatay ciyaartooyda kooxdiisa – Goobjoog News
Tababaraha cusub ee kooxda Muqdisho City Club Maxamed Meatiri Lamajed ayaa kulankii ugu horeeyay la qaatay ciyaartooyda,maamulka,shaqaalaha iyo taageeryaasha naadiga dowladda hoose wuxuuna xilkan kala badalay Husein Mbalangu oo u dhashay Uganda oo kooxdan hogaaminayay shantii sano lasoo dhaafay..
Guddoomiyahay kooxda Muqdishu City Club Abuukar Maxamed Sheekh ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid lagu soo dhawaynayo macalinkooda cusub ayna ka sugayaan in naadiga la gaaro guulo waaweyn.
Cabdullahi Cusmaan Daamey oo ah madaxa suuqa geynta xiriirka kubbadda cagta dalka ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay is badalka iyo horomarka ay samaynayaan maamulada kooxaha ka dhisan Soomaaliya.
Jaawhir Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka Gobolka Banaadir ayaa maamulka Gobolka kaga mahad celisay da’daalka iyo garab istaaga ay la garab taaganyihiin xidigaha matalaya kooxda dowladda hoose.
Sida ay sheegeen maamulka naadiga Muqdisho City Club tababarihii hore waxaa kooxda loogu diray natiijada aad u liitada macalinkan waxaa laga sugayaa in uu yimaado horomar sida uu Goobjoog u sheegay Cabdiqaadir Muxidiin Xaaji Dacar oo ah gudoomiye ku xigeenka naadiga Muqdisho City Club.
Si kastaba kooxda Muqdisho City Club ayaa horyaalka Soomaaliya Premier League 2018-2019 ku dhamaystay kaalinta 5-aad ee kala horeynta mana aheyn wax horay loogu bartay M.C.C sanadadii hore.
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Kulankii Dhexmaray Maamulka,Macalinka Iyo Ciyaartooyda